Maxaa Ka Bedelay Blogging Corporate Sannadaha Dhexdiisa? | Martech Zone
Maxaa Ka Bedelay Blogging Corporate Sannadaha Dhexdiisa?
Khamiis, Janaayo 18, 2018 Khamiis, Janaayo 18, 2018 Douglas Karr
Haddii aad i soo raacaysay tobankii sano ee la soo dhaafay, waad ogtahay inaan qoray Blogging Corporate for Dummies dib 2010. In kasta oo muuqaalka warbaahinta dhijitaalka ahi isbadalo waawayn ay sameeyeen 7dii sano ee lasoo dhaafay, si daacad ah uma hubo inay jiraan isbadalo aad u tiro badan markay tahay buuga iyo shirkadaha soo saara istiraatiijiyad ku saabsan baloogyada shirkadaha. Ganacsiyada iyo macaamiisha wali way u gaajaysan yihiin macluumaad weyn, shirkadaaduna waxay noqon kartaa ilaha ay raadinayaan.
Marka Maxaa Ku Bedelay Blogging Corporate?
Competition - iyadoo shirkad kasta ay furayso bog shirkadeed, fursadaha in codkaaga laga maqlo dadka badankood waa yar yihiin… haddii aadan soo dhigin wax cajiib ah. Qoraallada Blog-ga 7 sano ka hor waxay ahaayeen dhowr boqol oo erey oo laga yaabo inay leeyihiin sawir aad u yar. Maalmahan, fiidiyowga iyo sawirradu waxay xukumaan waxa ku qoran. Mawduucu waa inuu ahaadaa mid sifiican loo baaray loona qoray si kafiican tartamayaasha kale hadaad rajaynayso inuu soo jiito taraafikada iyo isbadalka ku haboon.
Frequency - macaamiisha iyo ganacsatadu si isku mid ah ayey ula socdaan, waxaa jira waxyaabo badan oo nacalad ah oo la soo saaray oo aan la cunin. Waxaan u fiirsan jirnay barta wax lagu qoro sida ciyaar nasiib - qoraal kasta wuxuu kordhiyay suuragalnimada in waxyaabahaaga la helo, la daawado, lala wadaago, oo lala falgalo. Maalmahan, waxaan horumarinaa maktabadaha waxyaabaha ku jira. Mar dambe kama hadleyso soo noqnoqoshada iyo soo noqnoqoshada, waxay ku saabsan tahay sameynta maqaal aad uga wanaagsan kan tartamayaagu sameeyay.
warbaahinta - oo ay weheliso ereyo-xisaabeed, muuqaalka nuxurka ayaa si aad ah isu beddelay. Xadka bandwidth aan xadidneyn iyo xulashada qulqulka ayaa ku dhejinaya podcasts iyo fiidiyowyo gacmaha qofkasta oo wata taleefan casri ah. Waxaan isku dayeynaa inaan ku soo bandhigno waxyaabo aan caadi ahayn iyada oo loo marayo warbaahin kasta si loo gaaro kheyraadka saxda ah.
mobile - xitaa macaamiisheena shirkadda B2B, waxaan arkeynaa in si ballaaran loo korsanayo akhristayaasha moobiilka dhammaan bogagga macaamiisheena. Haysashada deg-deg deg deg ah, jawaab-celin leh, iyo ka-qaybgal firfircoon ayaan ahayn iyo ikhtiyaar.
Website Dhise soo saaray this infographic la yaab leh, The Xaaladda Warshadaha Qorista & Tilmaamaha bilowga ah ee bilowga ah ee ku saabsan sida loo abuuro Blog kaas oo nagu dhex maraya barxadaha baloogyada shirkadaha, tirakoobka akhristeyaasha, akhlaaqda akhriste, tilmaamaha qorista, wadaagista bulshada, iyo wadista ku beddelashada xogtan.
Tags: 2017hubkaablogging shirkadahawadaagida warbaahinta bulshadagobolka wax lagu qorodegel dhise
Ma Jiraa Waqti Ka Wanaagsan Oo Lagu Bilaabo Shabakad Bulsho Oo Cusub?
Sidee Iswaafajinta iyo Iswaafajinta Suuqgeynta ugu Wanaagsan Natiijooyinka B2B LinkedIn